Kome imbenge: Sibi isimo emabhizinisini – Bayede News
Kome imbenge: Sibi isimo emabhizinisini
UKOMA kwembenge kwaboHlanga kuyizinkomba zokuthi
Posted on 08/08/2019 15/08/2019 by Bayede-News
UKOMA kwembenge kwaboHlanga kuyizinkomba zokuthi kuhlasele isikhathi sendlala. Izinyanga ezintathu zilandelana isimo samabhizinisi eNingizimu Afrika siyaqhubeka nokuba sibi. Ukuvala kwebhizinisi kusho ukuphela komsebenzi okukhonga indlala. Uma ubuka amandla erandi uma liqhathaniswa nezinye izimali, ikakhulukazi, idola lase-USA, kukushiya ugubha wuvalo ngoba liyehla liyenyuka.
Uma siqalaza onyakeni wezi-2017 irandi uma liqhathaniswa nedola mhla zingama-31 kuNtulikazi lalimi e-R12,99. Ngesikhathi esifanayo nonyaka lehlile lafinyelela e-R14, 15. Sivuke ngoMsombuluko libheke ezansi lise-R14,83 edoleni elilodwa.Sengathi sibheke e-R15 uma kuqhubeka kanje. Ngibalula idola kuphela, kodwa lokho kuchaza ukuthi kubi kakhulu uma liqhathaniswa nezimali zakwamanye amazwe esihwebelana nawo, njengalawo asebenzisa i-Euro nokunye.Sibhala nje sibabaza ukwenyuka kwentengo kaphethroli ngamasenti angaphezu kweshumi kuleli sonto, okushiya abasebenza ngezimoto bephelelwa ngamagama okubabaza. Ingcindezi enkulu ibhekene namabhizinisi aseNingizimu Afrika futhi yenza amanye awo adilize abasebenzi, amanye acabange ukuvala iminyango yokuhweba.
Umbiko okhishwe ngabakwa-IHS Markit PMI uveza ngokusobala ukuthi amabhizinisi angaphansi kwengcindezi ngokwehla kwezingamnotho. Izinga eliphansi elamukelekile ekusebenzeni kwamabhizinisi (index), lingamashumi ayisihlanu. Uma lehla ledlula ema-50 kusuke kuchaza ukuthi sibi isimo emabhizinisini. Izinga lokuthenga emabhizinisini aseNingizimu Afrika lehle lafinyelela kuma-48,4 enyangeni kaNtulikazi nonyaka, okusheshe ngendlela eyethusayo ngendlela engakaze ibonwe kusukela enyangeni uLwezi nyakenye.
Izinyanga ezintathu zilandelana kuze kube wuNtulikazi izinga lokuthenga lilokhu lehle njalo, yinto ebabazisayo futhi eyenza izingqapheli zisho ziphindelela ukuthi itshe limi ngothi. Ekhuluma ngalolu daba uMnu uMike Brown onguMpathi Omkhulu webhange iNedbank ukuqinisekisile ukuthi ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zonyaka ophezulu umnotho waseNingizimu Afrika bewuthwele kanzima. Uqhubeke wathi uma abahlaziyi bebuka lesi simo kuyacaca ukuthi inzikamnotho izokwehla ifinyelele ema-0.5%.
Eqhubeka uBrown ugcizelele ukuthi isimo somnotho wezwe sidinga izinyathelo ezisheshayo zokufukula umnotho. Uma kungathathwa zinyathelo ezisheshayo, lukhulu luyeza luyanyelela. AbakwaMoodys bacuthile, okuzokuthi uma nabo bethatha ezabo izinyathelo umphakathi waseNingizimu Afrika uthwale kanzima ngokwedlulele. Emphakathini kunemibuzo yokuthi kungabe osopolitiki bayalibona yini iwa iNingizimu Afrika elengela kulo. Iningi labo alisabuthi quthu ubuthongo ligijimisana kumakhomishini nasezinkantolo singekho isikhathi sokubhekana ngqo nomnotho wezwe. Kuso lesi sikhathi amabhange amathathu axoxisana nezinyunyana ukuze agweme ukudiliza abasebenzi ngenkathi bebuyekeza izinhlelo zokusebenza.
Abebhange iStandard Bank bazovala amabhange angama-91. Umbuzo obuzwa yizinyunyana ngowabasebenzi ababesebenza kulezi zikhungo. Abebhange i-ABSA nabo babuyekeza izindlela zokusebenza baxoxisana nenyunyana bebuka izindlela zokugwema ukudiliza abasebenzi. INedbank yona beyihlose ukudiliza abasebenzi abayi-1 500 kodwa muva nje kuyaxoxiswana ukuthi labo basebenzi abangase bagileke bangafakwa kumiphi imisebenzi. Lapha ngenhla sikhuluma ngamabhange namabhizinisi anamagama amakhulu, okusheshe kuzwakale uma kukhona okunyakazayo. Osomabhizinisi abancane bavala iminyango usuku nosuku ngenxa yale ngcindezi, iningi akubhalwa ngabo ngoba abekho emehlweni ezinyunyana nabacoshela izindaba. Osesebhizinisini kudingeka abuyekeze indlela asebenza ngayo, afune leyo ezokwehlisa izindleko ezithwalisa ibhizinisi kanzima.
Ngokusho kukaMnu uDumisani Mavundla okhulumela iCCMA, siyakhula isibalo sezinkampani ezifaka izaziso zokudiliza abasebenzi kuCouncil for Retrenchments sisuka e-137 ngonyaka owedlule sesifike e-185 kulo nyaka ngesikhathi esifanayo. Ngesonto eledlule kuphume izibalo zakwaStats SA zabangasebenzi eziveze ukuthi bangamaphesenti angama- 29 Uma lehla kanje izinga lomnotho kusadingeka osomabhizinisi bazibambe ziqine ngoba kunezinkomba zokuthi baningi abasazodiliza noma bavale. Alikabi bikho igama elinamandla elibuyisa ithemba eliqhamuka kuHulumeni ngezinyathelo eziphuthumayo zokubhekana nalesi simo iNingizimu ekuso.